အရိုးအထူးကုဆေးခန်း | CGH Hospital
ကျွန်ုပ်တို့၏အရိုးအဆစ်များသည် သဘာဝအတိုင်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီး နည်းလမ်းမမှန်စွာ အသုံးပြုမှုများကြောင့် အရိုးများပျက်ဆီးစေသည်။ မတော်တဆမှုများမှာလည်း အရိုးပျက်ဆီးရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အရိုးထိခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါက ပကတိအတိုင်း ကောင်းမွန်လာအောင် မှန်ကန်စွာ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် အချိန်မီကုသမှုခြင်းမှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးသည်။
CGH ဆေးရုံမှ အရိုးအထူးကုအဖွဲ့သည် အဆစ်နှင့်အရိုးဒဏ်ရာခံစားနေရသော လူတိုင်းကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနေပြီး လူနာများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အတွက်လည်း ကြင်နာစွာနှင့် စိတ်ရှည် သည်းခံမှုများစွာဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ CGHဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သော သူနာပြုအဖွဲ့၊ ဇီဝကမ္မကုထုံးပညာရှင်များ၊ အာဟာရပညာရှင်များနှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်များ ပါဝင်သည်။ အဖွဲ့၀င်တိုင်းသည် အကောင်းဆုံး စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်ကို ပေးရန် လိုအပ်သော ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံများရှိပြီး အရိုးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများ ရှာဖွေရာမှစ၍ ကုသသည်အထိ အကောင်းဆုံး အဖြေကို ရှာဖွေပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ အဆစ်နာခြင်း၊ အရိုးနာကျင်ခြင်း၊ ခြေထောက်နာခြင်း၊ အရိုးပွရောဂါ၊ နာတာရှည် အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ အသက်နှင့်ဆက်စပ်သော အရိုးအဆစ်နာနှင့် အလုပ်နှင့်ဆက်နွယ်သော အရိုးအဆစ်နာခြင်းများ သို့မဟုတ်ရုံးတွင်းရောဂါလက္ခဏာများကို ကောင်းစွာ ကုသနိုင်သည်။
ထိုအပြင် အရိုးနှင့် ပတ်သက်သောရောဂါများ ရှာဖွေရန်နှင့် ကုသမှုများ ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆုံးပေါ် စက်ပစ္စည်းများသာ တပ်ဆင်ထားပြီး ခွဲစိတ်မှုများ မတိုင်မီနှင့် ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် အကောင်းဆုံး ဆွေးနွေးမှုများ၊ အကြံပေးချက်များနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများ အတွက် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ ကိုယ်တိုင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည်။
အရိုး၊ ကြွက်သားအကျိတ်များနှင့် ဆက်စပ်သောခွဲစိတ်ကုသမှု
အရိုးပွရောဂါ အပါအ၀င် မှုမမှန်သောအရိုးဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် အရိုးပြသာနာများ အတွက်ကုသမှု
အရိုး၊ အရွတ်သို့မဟုတ် ကြွက်သားဒဏ်ရာများအတွက်ကုသမှု
Endoscopic ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် အားကစားဆေးပညာ ဆိုင်ရာကုသမှု
လက်နှင့်ဆက်စပ်သောခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့် မိုက်ခရိုခွဲစိတ်ခြင်း (အသေးစိတ်ခွဲစိတ်ခြင်း)
တည်နေရာ : CGH Main Building,1st floor
ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်များ : Daily 9.00 am - 7.00 pm
ဖုံး : +662 552 8777 ext. 1112
အီးမေးလ် : com@cgh.co.th
ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်များ : Daily 8.00 am - 8.00 pm
ဖုံး : +662 991 8999 ext. 355 , 2213
အီးမေးလ် : smh@saimai.com